Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Diyaarad Daad -gurayn oo lagu afduubtay Kabul ayaa lagu waayay Iiraan
Wararka Afgaanistaan • Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Iiraan • News • Ammaanka • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Ukraine War Deg Deg Ah • Wararka kala duwan
Wadamo badan ayaa ku sugan Afgaanistaan ​​iyagoo isku dayaya inay muwaadiniintooda ku duulaan nabadgelyo kadib markii dagaalyahanada Taliban ay dalka qabsadeen.
Gegida Diyaaradaha ee Kabul waxaa gacanta ku haya Mareykanka, Ukraine ayaa sidoo kale u dirtay diyaarad soo daad -gureysa muwaadiniinteeda. Diyaaraddan ayaa la xaday oo u kacday Iiraan.
Diyaarad laga leeyahay Ukraine oo Axadii timid Afgaanistaan ​​si ay u soo daadgureyso dadka reer Ukraine ayaa waxaa afduubtay koox aan la garanaynin oo diyaaradda Ukraine ku duushay Iiraan,
Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Ukraine ayaa u sheegay warbaahinta Ukraine: “Axaddii la soo dhaafay, diyaaraddeenna waxaa afduubay dad kale.
Diyaaraddii waa la xaday halkii ay diyaarad ka qaadi lahayd reer Ukraine, saddexda isku day ee daad -guraynteena sidoo kale kuma guulaysan maxaa yeelay dadka reer Ukraine ma aysan geli karin garoonka.
Sida laga soo xigtay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ukraine, afduubayaasha ayaa hubeysnaa.
kale duulimaadyada daadgureynta la qaaday iyada oo aan wax dhibaato ah.
Si kastaba ha ahaatee, wasiir ku -xigeenku ma sheegin wax ku saabsan waxa ku dhacay diyaaradda iyo in Ukraine ay doonayso inay soo celiso.
Wax war ah lagama bixin sida muwaadiniinta Ukraine looga daadgureyn karo Kabul oo saaran diyaaradan “ficil ahaan la xaday” ama diyaarad kale oo Kyviv soo diri karto
Wasiirka ayaa hoosta ka xarriiqay oo keliya in adeegyada diblomaasiyadeed ee Ukraine oo uu hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Dibedda Dmitry Kuleba “ay ka shaqaynayeen habka tijaabada shilka” toddobaadkii oo dhan.
Axaddii, diyaarad gaadiid milateri oo ay la socdeen 83 qof oo ay ku jiraan 31 qof oo reer Ukraine ah, ayaa ka timid Afgaanistaan ​​ee Kyiv.
Xafiiska madaxtooyada ayaa sheegay in 12 askari oo ka tirsan milatariga Ukraine ay dib ugu laabteen dalkooda, halka weriyayaal ajnabi ah iyo shaqsiyaad dadweyne ah oo codsaday caawimaad sidoo kale la daadgureeyay.
Xafiiska ayaa sidoo kale intaas ku daray in ku dhawaad ​​100 qof oo reer Ukraine ah ay weli filayaan in lagu daadgureeyo Afghanistan.